Mustaqbalka Apple Watch oo leh batteri dhaqaajiya si ay ugu siiso adeegsadaha macluumaadka xejiska ah | Waxaan ka socdaa mac
Mustaqbalka Apple Watch oo leh batteriga u dhaqaaqaya inuu u soo bandhigo macluumaadka hapt-ka isticmaalaha
Apple waxay isbahaysi ka heshay Apple Watch kaas oo siiya shirkada malaayiin badan oo dakhli iyo faa iidooyin ah. Waxay noqon kartaa aaladda uu aadka u jecel yahay Tim Cook, oo aan micne lahayn, ee uu isagu isagu kafaalo qaado. Taasi waa sababta aysan layaab u ahayn tirada shatiyadaha aan ku aragno dhammaadka sanadka ee loogu talagalay qalabkan. Tan ugu dambeysa ee la yaqaan waa tan ka hadlaysa suurtagalnimada in saacadda lagu daro baytari dhaqaajin kara. Dhamaadka: si aad u siiso jawaabaha haptic ee isticmaalayaashaada.
Shati cusub oo ay diiwaangashan tahay shirkadda Apple wuxuu ka digayaa suurtagalnimada abuuritaanka batteri awood u leh dhaq-dhaqaaq. Tan, waxay ku siin kartaa jawaabaha haptic ee adeegsadayaasheeda sidaas awgeedna waxay ku siin karaan macluumaad dheeraad ah haddii ay macquul tahay. Shirkadda Mareykanku waxay sii wadaa dadaalkeeda ku aaddan sameynta Apple Watch oo khafiif ah, markan waxay dooneysaa inay baabi'iso baahida loo qabo matoor taabto gooni ah. Halkii uu matoorku qaadan lahaa boos, Apple wuxuu raadinayaa inuu arko haddii ay ka dhigi karto batteriga inuu sameeyo labajibbaar il ahaan sida ay uga soo baxdo falcelinta xasaasiga ah. Codsigan oo loogu magac daray "Qalab elektiroonig ah oo la qaadan karo oo wata aalad habeysan oo leh unug batteriga guurguura", ayaa ah kii ugu dambeeyay ee isku dayo badan oo dib loogu rarayo matoorka xashiishka.
Waxa Apple ay rabto waa inaad heli karto batari koronto ku xiran shaashadda. Sidoo kale isku duubnaanta gariiradda ee loo qaabeeyey inay kiciso dhaqdhaqaaqa oscillatory. Haddii la helo, baahida loo qabo matoor habeysan oo gaar ah ayaa suuragal ah in laga takhaluso. Apple waxay u isticmaali kartaa booskaas sababo kale.
Hoos udhaca cufka aaladda fiiqan, marba marka ka sii dambeysa ayey lagama maarmaan u tahay qalabka astaamaha inuu dhaqaajiyo cufka si uu u soo saaro isla wax soo saarkaas. Tusaale ahaan, cufka koowaad marka loo eego sida ballaaran labaad wuxuu u dhaqaaqi karaa laba jeer sida ugu fog si loo soo saaro isla baaxadda wax soo saarka xanta. Xitaa marka cufka la yareeyo si loo xareeyo unug batteri weyn, booska dheeriga ah ee loo baahan yahay aaladda haptic-ga inuu dhaqaajiyo culeyska ayaa xaddidi kara booska loo heli karo cabirka unugga batteriga.
Iyadoo la tixgelinayo dhammaan waxyaabaha kor ku xusan, digniin waa in la sameeyaa. Inta waxaan ka hadleynaa shatiyada waa inaan maskaxda ku haynaa inay macquul tahay in fikrad ay warqad ku sii jirto oo aysan run noqonayn. Sannad kasta fikrado badan oo cusub ayaa la diiwaan geliyaa laakiin dad aad u tiro yar ayaa waligood run noqda. Ma garanayno waxa ku dhici doona midkan laakiin dabcan waxa kor loo qaaday waa mid aad u xiiso badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Mustaqbalka Apple Watch oo leh batteriga u dhaqaaqaya inuu u soo bandhigo macluumaadka hapt-ka isticmaalaha
Facebook ayaa diyaarinaysa dacwad ka dhan ah Apple oo ku saleysan sharciyada ka dhanka ah kalsoonida.